130W Izibane zeGesi zokuKhusela ngeGesi ziLed China Manufacturer
Inkcazo:Imililo yeLed Gas Canopy,Izibane eziLakini zeeGesi zokuThuthukiswa kweGesi,Iitishi zeeGesi zeCanopy Light Led
Home > Imveliso > Ukukhanya kweSitishi seGesi > 130W Izibane zeGesi zokuKhusela ngeGesi ziLed
Umzekelo No.: BB-CSD-100W-B2
Le ndawo engama-130W ephakamileyo iLed Gas Canopy Lights ine-15600 lumens ene-angle yee-120 degrees. Ezi zibane eziLedini zeeGesi zokuThuthuza iGesi zi-CRI ezingama-80 kwaye ziqinisekisiwe ukubonelela ngokukhanyisa, ukukhanya okungu-5000K kwimihlaba yomibini kunye yangaphandle. Ezi ziKhulu zeeGesi zeTyhuthi ziLed ine-Ingress Protection ye-65, echaza utshuli oluqinileyo kwaye lukhuselekile kumanzi okupomfa kuzo zonke izikhokelo. Ukuqulunqwa komqhagamshelwano weli khululo zegesi kuholele ukukhanya kwendwangu kwenza ukuba kusebenze kwiindawo ezahlukeneyo ezifana nezitishi zegesi, iigaraji, ii-port, kunye neendawo eziphakathi. Izixhobo zethu zokukhanya kwegesi Kulula ukulandela iphepha lokufakela elinikezelwe kwinkqubo yokufaka intaba. Inkqubo ibandakanya imingxuma yokugungqa kwi-fixture kwaye ifake ama-anchos ukuba adibene kwi-ceiling.
I-Led Canopy Light Fixtures Retrofit Kit 150W Qhagamshelana Ngoku
Ixabiso leMveliso yeeLayibhondi iLove Mount Canopy Lights 100W Qhagamshelana Ngoku
I-Outdoor Led Outbreed Canopy Lighting 150W Qhagamshelana Ngoku
I-Led Gas Canopy Retrofit Kits Izibane 150W Qhagamshelana Ngoku
Imililo yeLed Gas Canopy Izibane eziLakini zeeGesi zokuThuthukiswa kweGesi Iitishi zeeGesi zeCanopy Light Led Izibane zemililo ye-Led Gasw 150w Iiklip zeLed Canopy Retrofit Led Canopy Izibane zeCree Led Canopy I-Philips Led Canopy Lighting